Kooxda Chelsea oo guul soo laabsho leh ka gaartay kooxda Cardiff City +Sawiro – Gool FM
( Premier League ) 31 marso 2019 Kooxda Chelsea ayaa guul soo laabsho leh ka gaartay kooxda reer Wells ee Cardif City kulan ka tirsanaa horyaalaka Premier League , natiijada kulanka ayaana ku soo dhamaaday 2-1 oo ay ku badisay kooxda Bules .
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ee kooxaha Cardif City iyo Chelsea ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’aan wallow ciyaartoyda labada koox ay sameeyeen fursado dhowr ah oo gool loo filan karay .
Bules qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa ay sameesay lix isku day balse mid kamida ayaa gool loo filan karay halka kooxda martida loo ahaa ay sameeyeen labo isku day oo gool loo filan karay .
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo dhamaaday bar –baro gool la’aan ah , ciyaartoyda labada dhinac ayaana u huleelay qolka labiska si ay u soo qataam nasiino iyo talo soo qaadasho.
Muddo kaddib waxaa dib loo anaba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Cardif City ayaana la timid goolkii koowaad ee ciyaarta bilowgii hore ee qeebtii dambe ee ciyaarta waxaana u dhaliyey laacibkooda lagu magacaabo Victor Camarasa daqiiqadii 46-aad .
Chelse waxaa la soo gudboonaaday cadaadis daran waxa ayna dadaal dheer ay u galeen sidii ay isag soo gudi lahaayeen goolka deenta ee lagu yeeshay waxa ayna sameyeen fursado badan oo halis ah qeebtii dambe ee ciyaarta .
Daqiiqadii ugu dambeyey ee ciyaarta kooxda Bules ayaa heshay g oolka barejada ee ciyaarta waxaana u dhaliyey kabtankooda reer Spain ee Cesar Azpilicueta kaddib caawin uu ka helay Alonso daqiiqadii 84-aad ee ciyaarta .
Waqtigii dheeriga ee ciyaarta lagu daray kooxda Bules ayaa la timid goolka guusha waxaana u dhaliyey da’yarka reer England ee Ruben Loftus-Cheek waxaana goolkaas ka caawiyey laacibka rere Barazil ee wellian , natiijada ciyaarta ayaana noqatay 2-1 oo ay ku hogaamineyso kooxda Chelsea .
Ugu dambeen natiijada ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 oo ay ku badisay kooxda Reer Iondone ee Chelsea oo sameesay soo laabsho wanaagsan.
Shaxda rasmiga kulanka Premier League ee kooxaha Liverpool iyo Tottenham oo la shaaciyey